OnePlus 6 wuxuu maraa baaritaanka adkeysiga ee JerryRigEverything | Androidsis
OnePlus 6 shaki la'aan wuxuu ahaa halyeeyada weyn ee toddobaadkan. Dhamaadka-dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha ayaa durba dhab noqotay oo daah-furkeeda ayaa soo jiitay dareenka warbaahinta adduunka. Waxaan horeyba u ognahay wax walba oo ku saabsan taleefanka laftiisa, in kasta oo had iyo jeer ay jirto su'aal ah inay runti tahay mid iska caabin ah iyo in kale. Laakiin, tan waa horeba JerryRigWax kasta oo taleefanka geliya tijaabadiisa adag.
Sidan ayaan ku arki karnaa haddii OnePlus 6 uu ku guuleysto inuu ku aflaxo tijaabadan adkeysiga leh midabada duulaya.. Nidaamku waa isku mid had iyo jeer. Waxaad ku bilaabeysaa xoqida shaashadda, dhinacyada iyo gadaasha, waxaan bilaabaynaa inaan gubno ka dibna waxaad isku dayeysaa inaad qalloociso qalabka.
Imtixaanka dulqaadku wuxuu ku bilaabmayaa xoqidda shaashadda OnePlus 6. Dareenkan, taleefanka ayaa u hoggaansamaya waxa laga filayo, maaddaama noocyada aan la qadarin illaa heerka 6. Heerka 7 waxaan arki karnaa nooc aad u qoto dheer oo aan si cad u diidi karin. Waxay u hoggaansan tahay filashooyinka waxayna ku jirtaa heerka dhammaadka-dhamaadka kale.
Dhinacyada iyo gadaasha taleefanka ayaa iyaguna iska caabiyey xoqitaankaas. Waa la arki karaa in kamarada ama dareeraha faraha aan la xoqin karin. Marka iyaga waxaa lagu hayaa xaalad qumman markasta. Kadib shaashadda OnePlus 6. way guban doontaa ilbidhiqsiyo ka dib bar ayaa ka muuqanaysa shaashadda, taas oo hadhay. Wax caadi ah shaashadaha AMOLED.
Laakiin waxaan hadda gaarnay xilligii ay inbadan sugayeen. Sababtoo ah OnePlus 6. waa la laalaabayaa Tijaabada muhiimka ah ee tusaalahan, maadaama ay tahay aalad ka samaysan quraarad. Laakiin kiiskan waxaan arki karnaa in dhamaadka sare uu si qumman u diiddan yahay. Wax dildilaac ah ama galaas jaban ma jiro waqti kasta.
Sidaa darteed, waxaan dhihi karnaa shaki la'aan in OnePlus 6 uu ka gudbay tijaabadan adkeysiga by JerryRigEverything. Dhamaadka dhamaadka astaanta Shiinaha waa mid adag oo xitaa ka gudubta imtixaanka halka uu ku fooraro. Xaqiiqdii waa shaqo fiican oo ka timid astaanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » OnePlus 6 wuxuu maraa imtixaanka ugu caansan ee adkeysiga